Fivoriambe faha-72n’ ny firenena mikambana : « Maro ny ezaka efa vitan’i Madagasikara amin’ny fanampiana ny tanora » -
AccueilRaharaham-pirenenaFivoriambe faha-72n’ ny firenena mikambana : « Maro ny ezaka efa vitan’i Madagasikara amin’ny fanampiana ny tanora »
Tsy mpandray anjara fotsiny fa manana andraikitra. Fahombiazana ho an’ny diplômasia ny fandraisan’i Madagasikara anjara amin’ny fivoriambe faha-72n’ny firenena mikambana izay tanterahina any New York – Etazonia. Ankoatra ny fandraisan’anjara amin’ireo adihevitra isan-karazany, dia nitarika ny fivoriana faha-8 ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Izy araka izany no nandrindra ny fandraisam-pitenan’ireo filoham-pirenena nandritra izany. Ankoatra izay, dia nandray anjara tamin’ny hetsika momba ny « tondrozotran’ny vondrona afrikana », izay nokarakarain’ny tahirin’ny firenena mikambana ho an’ny mponina (Fnuap) sy Guinée, ihany koa ny filoham-pirenena malagasy. Hetsika izay mifantoka amin’ny fanatsarana ny fiainan’ny tanora afrikana. Tanjon’io hetsika io ny fanamafisana ny firosoan’ny tanora eo amin’ny asa, indrindra amin’ny lafiny fampiofanana arak’asa, ny fametrahana tontolo milamina hisarihana ireo mpampiasa vola ary ny fanatsarana ny lafin’ny sosialy. Filoham-pirenena faha-3 nandray anjara fitenenana ny filoha Malagasy, Hery Rajaonarimampianina, izay nanamafy fa « maro ireo ezaka efa vitan’i Madagasikara eo amin’ny fanampiana ny tanora na dia mbola maro aza ny ezaka tokony hatao. Ao anatin’izany ny fanohizana ny fanokafana ireo ivon-toeram-pampiofanana sy Lisea Teknika manerana ny Nosy. Toa izany koa ny fametrahana vitrine numérique, ary ny famoronan’asa ho an’ny tanora ». Tafiditra amin’ny fanohanan’ny firenena mikambana io ezaka fampandrosoana ataon’ny vondrona afrikana io ny fihaonana maromaro nataon’ny filoham-pirenena Malagasy, Hery Rajaonarimampianina, tamin’ireo tompon’andraikitra samihafa eo anivon’ny firenena mikambana. Ao anatin’izany ny fihaonana tamin’ny sekretera Jeneraly Lefitra, Ramatoa amina Mohamed sy ny filoha ary sekretera Jeneraly lefitra misahana ny raharaha politika Jeffrey Feltman.
Tetsy ankilan’izay, nanao sonia ny fifanarahana momba ny fanafoanana fampiasana fitaovam-piadiana nokleary ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Fifanarahana izay natao hisorohana ireo ady sy disadisa eo amin’ireo firenena manerana irao tontolo izao. Marihina fa mihatra avy hatrany io fifanarahana io rehefa feno 50 ireo firenena manao sonia.
Nandritra ny fandraisam-pitenanana tao anatin’ny fivoriambe kosa dia nandray anjara fitenenana amin’ny maha filoham-pirenena Malagasy azy ny filoha, Hery Rajaonarimampianina, nefa koa amin’ny maha filoha mpitantana ny Comesa sy ny Frankôfônia azy. Navoitrany ireo ezaka ataon’i Madagasikara eo amin’ny sehatra maro toa ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fanarenana ny firenena taorian’ny krizy politika niainan’ny firenena nandritra ny 5 taona sy ny tsy fahafahan’ny firenena malagasy nifandray tamin’ny sehatra iraisam-pirenena. Toa izany koa ny fifantohan’ny toe-karena malagasy amin’ireo 75% mivelona amin’ny tontolo ambanivohitra, ny ady amin’ireo areti-mifindra, ny ezaka samihafa ataon’ny fitondrana amin’ny ady atao amin’ny fahantrana, ny tsy fandriam-pahalemana…